LG mara ọkwa X Power2, smartphone nke pụtara ìhè na nnukwu batrị ya | Gam akporosis
Jose Alfocea | | Batrị, LG, MWC
Companylọ ọrụ South Korea LG enwebeghị ike ịnagide Mobile World Congress 2017 na Barcelona nke na-amalite dị ka izu na-esote ma kwupụta ọkwa ọhụụ, LG X Power 2, smartphone nke na-anọchi anya nnukwu batrị ya na ihe elu iji mee ka ndị ọrụ mgbasa ozi na ndị egwuregwu nwee mmasị na egwuregwu.
LG X Power2 ọhụrụ ahụ, dịka ị nwere ike ịhụ site na nkọwapụta ọrụ aka ya na anyị ga-aza n'okpuru, ọ bụ ama-ọgwụgwụ ama na ụfọdụ ụdịdị na, iji tinye ya nwayọ, hapụ ọtụtụ ihe ịchọrọ, ma o nwere nnukwu batrị "Iji mezuo ihe ndị ahịa na-achọ iji ngwa [ume ike] eme ihe ugboro ugboro" yana atụmatụ dị iche iche igwefoto na-enye.
1 LG X Power 2, smartphone nwere ikike kwụụrụ onwe ya iji bulie onwe gị ma kpọọ ọtụtụ
1.1 LG X Power2 mpempe akwụkwọ
LG X Power 2, smartphone nwere ikike kwụụrụ onwe ya iji bulie onwe gị ma kpọọ ọtụtụ
Ọ bụ ụlọ ọrụ ahụ n'onwe ya mere ọkwa site na ntọhapụ mgbasa ozi, yabụ na anyị amala, opekata mpe, ihe niile ụlọ ọrụ ahụ chọrọ ka anyị mata banyere LG X Power2 ọhụrụ.
Dịka anyị ga-ahụ ma emechaa, ndepụta nkọwa ga-abụ ihe na-akụda mmụọ maka ọtụtụ ndị ọrụ. Dị ka ozi ụlọ ọrụ ahụ si kwuo, na LG X Power2 batrị bụ otu n'ime isi na-elekwasị anya ebe ọ bụ na ọdụ a nwere 4,500mAh batrị na anyị ga-achọrịrị ihe karịrị otu na smartphones anyị. Nke a, yana 720p àgwà gị na ihuenyo, ga-eme ka obodo kwụụrụ ekwentị ahụ dị elu nke ukwuu ma e jiri ya tụnyere ọdụ ndị ọzọ n'otu akara ahụ.
LG X Power2 nwere ike kachasị ike batrị nke akara LG niile ka ndị ọrụ nwee ike ịnụ ụtọ ọtụtụ awa nke ọtụtụ ihe ntanetị na nnukwu ihuenyo ya na-enweghị nchegbu gbasara ịmegharị.ka Juno Cho, onye isi oche nke LG Electronics Mobile Communications Company kwuru. Usoro X niile bụ nnukwu teknụzụ na uru dị ukwuu, ihe abụọ dị mkpa maka ndị ahịa ama ama taa.
N'ezie, ụlọ ọrụ ahụ na-emesi obi ike na e mepụtara ọnụ ọhụrụ ahụ ka ọ bụrụ enwere ike iji ya na ngwụsị izu ọ bụla na-enweghị ike ịbanye na ya n'ime ọkụ eletrik Ọzọkwa, naanị otu awa ịkwụ ụgwọ ọ ruru ọkara batrị ya:
Ezubere LG X power2 ka ọ na-agba ọsọ na ngwụsị izu niile na-enweghị ịghaghachi. Ebubo zuru ezu, LG X power2 nwere ike igwu vidiyo na-aga n'ihu ihe dị ka awa 15, nye ụzọ ntụgharị maka ihe dị ka awa 14, ma ọ bụ sọọfụ webụ ihe ruru awa 18 LG X power1 gụnyere teknụzụ na-agba ọsọ ọsọ dị elu nke ndị ọrụ na-arụ ọrụ taa . Otu ụgwọ elekere na-enye batrị batrị pasent 2 ụgwọ zuru ezu nke na-achọ ihe dị ka elekere abụọ, okpukpu abụọ karịa ngwa ngwa ọtụtụ ekwentị.
Ihe ọzọ LG X Power2 na-elekwasị anya bụ selfies. N'ezie, igwefoto ya n'ihu nwere Auto Shot, otu igwefoto UX igwefoto ọhụrụ nke ga-ebute ihe mgbochi n'ihu mgbe achọpụtara ihu. Dị ka ekwentị ndị ọzọ anyị hụburu, LG X Power2 ga - akwado mmegharị maka ngwa ngwa ngwa ngwa.
Ọ gụnyekwara Teknụzụ Nkasi Obi nke na-eme ka ịgụ akwụkwọ e-akwụkwọ na ihe ndị na-atọ ọchị "nwee ntụsara ahụ site na mbenata ọkụ ọkụ na-acha anụnụ anụnụ sitere na ihuenyo ahụ."
Ọgwụ ọhụrụ ahụ ga-abịa ọkọlọtọ na gam akporo Nougat ọ ga-adị na ụdị abụọ yana 16 GB nke nchekwa dị n'ime nwere ike ịgbasa ruo 2 TB site na kaadị micro SD ma nwee ọdịiche dị na RAM ha: 1,5 ma ọ bụ 2 GB.
Ọ nwekwara ọkọlọtọ akụkụ na ibu ibu na a ga-enye ya na njedebe anọ (Black Titan, Shiny Titan, Shiny Gold na Shiny Blue) nke a ga-ewepụta na March na Latin America; emesia ọ ga - agbasa na United States, Asia, Europe, na "mpaghara ndị ọzọ." Banyere ọnụahịa, anyị amaghị ihe ọ bụla n'oge a.
LG X Power2 mpempe akwụkwọ
Ihuenyo: 5.5 nke anụ ọhịa ahụ HD In-cell Touch
Chipset: 1.5 GHz Octa-isi
Igwefoto: Main 13MP / N'ihu 5MP (Wide Angle / LED Flash)
Ebe nchekwa: 2GB ma ọ bụ 1.5GB Ram / 16GB ROM / Micro SD (ọ gbasaa iji 2TB)
Sistemụ nrụọrụ: Android 7.0 Nougat
Akụkụ: 154.7 x 78.1 x 8.4 mm
Netwọk: LTE / 3G / 2G
Njikọta: Wi-Fi (802.11 b, g, n) / Bluetooth 4.2 / USB 2.0
Agba: Black Titan / Shiny Titan / Shiny Gold / Shiny Blue
Ndị ọzọ: USB OTG / Gyro Sensor
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » LG » LG mara ọkwa X Power2, smartphone nke na-apụ apụ maka nnukwu batrị ya